Ifektri yemoto yaphansi yemoto, Abahlinzeki - Abakhiqizi baseChina bezinto eziphansi
Omata bonyawo lwemoto abakhiqizwa yiBensen banobungani emvelweni, banethezekile, bayaphefumula futhi abashelelezi. Ungahlinzeka ngemodeli yokuthenga umkhiqizo ophelile noma uthenge izinto zokusetshenziswa ukuze uzenzele ngokuthanda kwakho. Omata bezimoto zikaBensen benziwa ukunciphisa izingozi ezifihliwe ezibangelwa amacansi ezimoto.
IBensen ikhiqiza okwehlukile kukamata wezinyawo zezimoto, okunempilo nokwemvelo, okuphephile nokungasheleli.
Isitolo esidayisa yonke impahla Universal Car Mat Carpet PVC Floor Mat
Izinsimbi zikaBensen zemoto phansi zinezinto zokulwa neslip / anti-slip, njengoba zinendawo engehla yokushelela yokuphepha okuphezulu ngenkathi ushayela.
I-China Manufactory Foot Black Mats Floor Mat Yezinto Zemoto
Omata bezinyawo zezikhumba zemoto ngokuvamile bakhiwa ungqimba lwesikhumba, ungqimba oluphakathi lwesipanji, nolwelwesi olungezansi lwezinsiza ezingasheleli.
Ikhwalithi Ephakeme Yesikhumba Esingangenisi Manzi Izinyawo Zemoto Mat
Okwamanje imakethe yemoto yesikhumba yonyawo wensimbi ikakhulukazi isikhumba sokufakelwa, le micimbi yonyawo lwezinto ezibonakalayo inethezekile futhi ithambile, umoya ophakeme, ongagqoki ukugqoka, kuyizindleko eziphakeme kakhulu zamata ezinyawo zemoto, kuyisinqumo esihle iningi yabanikazi bezimoto.
Ikhwalithi Ephakeme yangokwezifiso ehlukahlukene ye-PU Car Foot Mat Material
Impahla yemata yesikhumba imvamisa yakhiwa ngemicu yamaprotheni evalwe ngokuqinile, futhi inengqimba ekhethekile ebunjiwe enephethini yokusanhlamvu yemvelo nokukhazimula.
BPA Mahhala Izithuthi Ngokwezifiso Imoto Phansi Mats Izinto
Omata bonyawo lwemoto banethezekile futhi bahlala isikhathi eside, ngobunono obuhle besikhumba sendawo, bakhululeke ngokwengeziwe futhi banethezekile isikhathi eside sokushayela. impahla enzima kakhulu ye-XPE, ukuvikelwa kwemvelo, okungenaphunga, kepha futhi nokuvikela ukuguga okukhulu, okuqinile.
Umugqa we-Diamond Auto Foot Mat Foam ohamba phambili we-Car Floor Mats
Omata bezimoto bahlanganisa ukumunca amanzi, ukumunca uthuli, ukukhipha ukungcola nokufakwa kwemisindo ukuvimbela ukushelela phakathi kwe-clutch, brake kanye ne-mpintsha. Gwema izingozi zokuphepha. Gwema izingozi zokuphepha.
Izinto Ezihlala Isikhathi Eside Futhi Zokuvikela I-Diamond Car Mats PVC Isikhumba Sezinto
Imathiriyeli kamata kaBensen nayo iqeda nya umsindo osalayo nemisindo enomsindo emotweni, iqinisekisa ukuthi ukuvikelwa kokuzwa akulinyazwa.